. ကျောင်းကောင်းကောင်းတွေကပေးတဲ့ပညာသင်ဆုတွေကိုစုံစမ်းရင်း ပြည်ပထွက်ခွာပညာရှာဖို့ပြင်ဆင်နေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံက အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်ကျောင်းသားတွေကိုဦးတည်ပြီး ခေါင်းစဉ်ပါအကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ အများအားဖြင့် စာသင်ကြားမှုအထောက်အကူပြုဆု - Scholarship နာမယ်တွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာအရင်ကတည်းကအသုံးနည်းခဲ့တာဖြစ်လို့ ဒီနေရာမှာ မရမကဘာသာပြန်မယ့်အစား အင်္ဂလိပ်နာမယ်ကိုသာသုံးသွားဖို့ခွင့်ပြုချက်ကြိုတင်တောင်းခံအပ်ပါတယ်။
. ပထမဦးဆုံး စကောလားရှစ်တွေအကြောင်းမပြောခင် Grant ဆိုတဲ့ ပညာသင်ဆုအကြောင်းအရင်သိထားဖို့လိုသလို အမေရိကန်နိုင်ငံမှာကျောင်းလာတက်ဖို့ဆိုရင် Fafsa ဆိုတဲ့ Free Application for Federal Student Aid အကြောင်းသိထားရင် ပိုမိုနှံ့စပ်အောင်လေ့လာနိုင်ဖို့ အသုံးဝင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။
. အစပိုင်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း ဘယ်လိုစာသင်ဆုပေးတဲ့ကျောင်းမဆို စာစီစာကုံး (သို့) ကိုယ်တိုင်ရေးစာတစ်ခုခုကိုတင်ခိုင်းလေ့ရှိတယ်။ ဒါကို အင်္ဂလိပ်လိုရေးရသလို ကျောင်းသားအနေနဲ့ ကျောင်းကလက်ခံတဲ့အဆင့်တစ်ခုအထိရေးပြရတာကြောင့် အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်တဲ့ပြည်ပစာသင်ဆုရှာဖွေနေတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုရည်ညွှန်းတယ်လို့ပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
. စစ်တမ်းတစ်ခုအရ အမေရိကားမှာ ဒေါ်လာ (၁ဝဝ) နဲ့အထက် Grant ပညာသင်ဆုပေးတဲ့ အစိုးရ၊ ဖယ်ဒရယ်ပြည်နယ်၊ ဖောင်ဒေးရှင်း၊ ကုမ္ပဏီ၊ ကော်ပိုရေးရှင်း၊ အကျိုးအမြတ်မယူတဲ့အဖွဲ့အစည်း၊ ပညာရေးအသင်းအဖွဲ့ နဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသာမက တသီးပုဂ္ဂလချမ်းသာသူတွေ စတဲ့ အဖွဲ့အစည်း၊ လူပုဂ္ဂိုလ် - Grant Makers ပေါင်း (၈၈ဝဝဝ) ခန့်ရှိပြီး နှစ်စဉ်ထောက်ပံ့ငွေ ဒေါ်လာ သန်း (၄ဝဝဝဝ) ရှိတယ်ဆိုတာ သိရပါတယ်။
. စကောလားရှစ်ရဲ့သဘာဝ သတ်မှတ်ချက်အတုိုင်း ကျောင်းသားကို လစဉ်၊ နှစ်စဉ် အပြင် စာသင်ကာလ - Semester အလိုက် ထောက်ပံ့ငွေပေးနေကျဖြစ်ပေမယ့် Grant တစ်ခုရတယ်ဆိုရင်တော့ စာသင်နှစ်တစ်ခုလုံးအတွက်၊ မေဂျာတစ်ခုလုံးအတွက် (၁) ကြိမ်သာ အပြီးပေးတာဖြစ်ပြီး ပြန်ဆပ်စရာမလိုတဲ့ ပညာသင်ကူငွေဖြစ်ပါတယ်။
. မားကက်တင်းနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့တစ်ချို့စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းတွေက Grant ကို ချေးငွေပုံစံနဲ့ ပုံမှားရိုက်ကြော်ငြာချင်တာတွေရှိတာကြောင့် အမှတ်မှားနိုင်တာတွေကို ကျောင်းသားတွေသတိထားရမယ်။ ဒါပေမဲ့ Grant ရဲ့ စိမ်ခေါ်မှုတစ်ခုက စကောလားရှစ်လိုပဲ Grant ရဖို့ Grant Writing ရေးတင်ရတာပါ။ Grant Writing ဟာ အမြဲတမ်း စာစီစာကုံးဖြစ်နေဖို့မလိုပဲ တင်ပြလွှာ - Proposal အနေနဲ့လည်းလျှောက်နိုင်တာဖြစ်လို့ ကန့်သတ်ချက်လျော့နည်းပါတယ်။
. "Fafsa ကိုလျှောက်ဖို့ ကျောင်းသားဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံသား ဒါမှမဟုတ် အနည်းဆုံး Green Card ကိုင်ထားတဲ့ PR - Permanent Residence (Noncitizens တစ်မျိုးမျိုး) ဖြစ်ရပါမယ်" နိုင်ငံပြင်ပကနေလာတက်တဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျောင်းသားတစ်ယောက်ဟာ Fafsa ကို လျှောက်ခွင့်မရှိသလို အလည်လာသူဧည့်သည်တွေဟာလည်း Fafsa လျှောက်ခွင့်မရနိုင်ပါဘူး။
. Fafsa ကိုရဖို့ စာစီစာကုံးမလိုသေးပါ။ ကျောင်းသားဆီကနေ SAP - Satisfactory Academic Progress ဆိုတာလိုပါတယ်။ အဓိကလိုအပ်ချက်ကတော့ ကျောင်းသားရဲ့စာသင်ခန်းရမှတ်တွေမှာ စီ - C ထက်မနိမ့်တဲ့ စာလိုက်နိုင်မှုစွမ်းရည် ရှိရပါမယ်။ တစ်ဆက်တည်းမှာ ကိုယ်တိုင်အလုပ်လုပ်ရင် ဝင်ငွေစာရွက် - Pay Stub or Paycheck ၊ မှီခိုဆိုရင် မိဘတွေရဲ့ဝင်ငွေခွန်ကိုကြေငြာတဲ့ W2 Form ရယ်၊ နှစ်ကုန်လို့အခွန်ဆောင်ထားပြီးတဲ့ Tax Return Transcript တွေတင်ရတော့ အလုပ်ရှုတ်လှသလို ရုံးစာရွက်တွေတင်ဖို့ နဲ့ အွန်လိုင်းဖောင်ဖြည့်ရတာနဲ့မရင်းနှီးသူတွေအဖို့ ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။
. ပြည်နယ်ဘက်ကစစ်ဆေးပြီးလို့အတည်ပြုပေးလိုက်တယ်ဆိုရင် ကျောင်းသားဟာ Fafsa ကနေ ကျောင်းစာသင်နှစ်တစ်နှစ်စာအတွက် အများဆုံးဒေါ်လာ (၅၅၅ဝ) ကို ကျောင်းလခတွေကနေ ထုတ်နှုတ်အကုန်အကျခံနိုင်ပါတယ်။ ဒါက တစ်နှစ်စာဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းနှစ်တွေအတွက် အထက်ကပြောခဲ့သလို နောက်ဆုံးရထားတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေနဲ့အသစ်ထပ်လျှောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ . . စကောလားရှစ်ဘက်သွားရအောင် . .။
. စကောလားရှစ်တွေကို အဖွဲ့အစည်းအမျိုးမျိုးက ပုံစံမတူအောင်ပေးကြပါတယ်။ အောက်မှာအသေးစိတ်ဆက်ဖတ်ကြည့်ပါ။
Academic Scholarships ။။။။။။။။။။ အကယ်ဒဲမစ်စကောလားရှစ်က စာသင်သားကိုအဓိကပေးတဲ့ဘယ်လိုစာသင်ဆုမျိုးမဆိုအကျုံးဝင်ပါတယ်။ ကျောင်းသားဖြေဆိုတဲ့ GPA - Grade Point Average လို အခြေခံအမှတ်အပြင် ကောလိပ်တက်ဖို့ဖြေထားတဲ့ SAT - Scholastic Assessment Tests နဲ့ ACT - American College Testing Program တို့နဲ့ စာသင်ဆုပေးမပေးဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်တာမျိုးပါ။
Athletic Scholarships ။။။။။။။။။။ အားကစားဆိုင်ရာစကောလားရှစ် ကို အားကစားတစ်ခုခုမှာထူးချွန်ရင်လျှောက်ထားနိုင်တဲ့ကျောင်းတွေရှိပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဟာ စာထက်အားကစားမှာသိပ်ထူးချွန်နေရင် အတန်းတက်ပေးတာမျိုးအပြင် ကျောင်းလခကင်းလွတ်ခွင့်တစ်ခုဖန်တီးပေးထားတဲ့ စာသင်ဆုဖြစ်ပါတယ်။
Merit Scholarships ။။။။။။။။။။ ထူးချွန်စကောလားရှစ်မှာ အလွှာအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကျောင်းတစ်ကျောင်း၊ မေဂျာတစ်ခု၊ လိုင်းတစ်လိုင်း၊ ဘာသာရပ်တစ်ခုမှာ ပေါက်မြောက်အောင်မြင်သူကိုပေးတဲ့စာသင်ဆုမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ကျပြန်တော့ ကလပ်အသင်းတွေမှာ၊ လူမှုအသင်းအဖွဲ့ နဲ့ ပရဟိတလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့လုပ်ရပ်တွေကြောင့် အထူးပြုလျှောက်ထားနိုင်တဲ့ "ပေးချင်သလိုပေးနိုင်တဲ့ စိတ်ကြိုက်စာသင်ဆု" လို့ နားလည်နိုင်ပါတယ်။
Merit-based ။။။။။။။။။။ ထူးချွန်မှုတစ်ခုခုကိုအခြေခံတဲ့ ဒီစကောလားရှစ်မှာ ကျောင်းသားရဲ့စာတော်မှု၊ အနုပညာ၊ အားကစား နဲ့ တခြားအရည်အချင်းတွေကိုထည့်တွက်နိုင်ပါတယ်။ ဒီဆုရပြီဆိုရင် ကျောင်းသားတက်မယ့်ကျောင်းကို အဖွဲ့အစည်းကနေ ချက်လက်မှတ်ကိုတိုက်ရိုက်ပေးပို့ပါတယ်။
Need-based ။။။။။။။။။။။ လိုအပ်မှုတစ်ခုခုကိုဦးတည်ပြီးပေးတဲ့စာသင်ဆု ဆိုတော့ အကျိုးမျှော်ပြီးလုပ်တဲ့ကြော်ငြာနဲ့အမှတ်မှားနိုင်ပါတယ်။ ဒီအမျိုးအစားက အများအားဖြင့် ကျောင်းသားအတွက်ရည်ရွယ်တယ်ဆိုရင် Grant အနေနဲ့ပေးကြပါတယ်။
Student-specific ။။။။။။။။။။ ထူးခြားတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုပေးတဲ့စာသင်ဆုလို့သိရပါတယ်။ ဒီပရိုဂရမ်ကိုဝင်ဖို့ လူမျိုး၊ ဘာသာရေး၊ မိသားစုအသိုင်းအဝိုင်း နဲ့ ကျန်းမာရေးကုသမှုနောက်ခံတွေလိုပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လူနည်းစုဖြစ်သူကျောင်းသားတွေကိုရွေးချယ်ပြီးပေးတတ်ပြီး နမူနာအနေနဲ့ သူဋ္ဌေးကြီးဘီဂိတ်နဲ့ဇနီးတို့ရဲ့ The Gates Millennium Scholars ဆိုရင် ထူးချွန်တဲ့အာဖရိကန်အမေရိကန်၊ အိန္ဒိယမ်းအမေရိကန်၊ ကျွန်းဆွယ်ဖွားအမေရိကန် နဲ့ လက်တင်အမေရိကန်တွေကိုပေးတဲ့စာသင်ဆုလို့သိရတယ်။
Career-specific ။။။။။။။။။။ အလုပ်အကိုင်ပေါ်မူတည်ပြီးပေးတဲ့စာသင်ဆုက နောင်အကျိုးမျှော်မှုကင်းရဲ့လားဆိုတာ စဉ်းစားစရာရှိပါတယ်။ ကျောင်းတစ်ခု၊ တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုက သူတို့ရဲ့ဘာသာရပ်တစ်ခုခုမှာအင်မတန်ထူးချွန်ပြီး နောင် ကျောင်းကိုရော၊ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ကကုမ္ပဏီတွေကြားမှာရော အလုပ်အကိုင်ရမှုကိုပါ အာမခံပြီးပေးတဲ့ဆုမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းက ဒီဆုရထားသူကိုလက်မလွှတ်နိုင်သလို သတ်မှတ်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီ၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုမှာမလုပ်တော့ရင် ဒီဆုကိုရပ်ဆိုင်းနိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ ခံဝန် - Bond ထိုးထားရတဲ့စာချုပ်တွေ နောက်ကွယ်မှာရှိနိုင်ပါတယ်။
Brand Scholarships ။။။။။။။။။။ တံဆိပ်နဲ့ကုန်ပစ္စည်းကိုပရိုမိုးရှင်းလုပ်ရင်းပေးတဲ့စာသင်ဆုမျိုးပါ။ ဥပမာအနေနဲ့ Miss America Scholarships ဆိုရင် ပါဝင်တဲ့အလှမယ်ဟာ ကျင်းပတဲ့ကုမ္ပဏီကပေးတဲ့စာသင်ဆုနဲ့ အမေရိကားမှာကျောင်းပြီးအောင်တက်နိုင်ပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်မှာလည်း ဒီအလှမယ်တက်တဲ့အတွက် Miss America ရဲ့ ပုံရိပ်ကပိုလင်းလှက်လာသလို ကျောင်းရဲ့ကျော်ကြားမှုကလည်းပိုမိုသင်းပျံ့လာနိုင်တဲ့ ကြော်ငြာစကောလားရှစ်လို့ နားလည်ရပါတယ်။
Creative Contest Scholarships ။။။။။။။။။။ တီထင်ဆန်းသစ်နိုင်မှုစွမ်းအားပေါ်မူတည်ပြီးပေးတဲ့စာသင်ဆုမျိုးပါ။ ဒီဆုရတဲ့ကျောင်းသားဟာ သက်သေပြစရာလိုတဲ့အသေးစားစီမံကိန်း - Mini Project တစ်ခုခုကို တင်ပြရတတ်ပါတယ်။ ဒီလုပ်ရပ်ကနေ အကဲဖြတ်အဖွဲ့က သူ့အကြံအစည် နဲ့ စိတ်ကူးက အနာဂါတ်မှာဖြစ်လာနိုင်စရာရှိတယ်ဆိုတာကိုအဓိကထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး အားပေးကူညီတဲ့စကောလားရှစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
. အပေါ်က စကောလားရှစ်မျိုးစုံကိုကြည့်ပြီး စာသင်ဆုဆိုတာ "ကျောင်း" ဆိုတဲ့နေရာတစ်ခုတည်းကလာတာမဟုတ်တာကို မြင်သာလောက်ပါပြီ။ ဒါကြောင့် အမေရိကန်ကျောင်းသားတွေဟာ သူတို့ကျောင်းက မိဘဆရာအသင်းကိစ္စတွေ၊ လူမှုရေးရံပုံငွေပွဲတွေ၊ ပွဲလမ်းသဘင်ပြင်ဆင်ခြင်း နဲ့ အစိုးရရုံးတွေရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာ လုပ်အားပေး - Volunteer လုပ်ပေးကြရင်း အခွင့်အလမ်းရှာကြတယ်။
. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အဲဒီလို လူတွေထဲမှာ သူဋ္ဌေးတွေ အမြောက်အများပါဝင်ပြီး ငွေကြေးတတ်နိုင်တဲ့အလျှောက် သူတို့ကူညီနေတဲ့ကျောင်းအပြင် ကျောင်းသားတွေရဲ့ရှေ့ရေးအတွက် ကိုယ်ပိုင်စကောလားရှစ်တွေထောက်ပံ့ပြီး အနာဂါတ်လူငယ်တွေ အဖိုးနှုန်းသက်သာရုံမက ကျောင်းမြန်မြန်ပြီးအောင် မြေတောင်မြှောက်တတ်ကြလို့ပါဘဲ။
. မြန်မာနိုင်ငံမှာလဲ ဒီလိုစာသင်ဆုတွေပေးနိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ လူချမ်းသာတွေ အများကြီးရှိကြပါတယ်။ တစ်ချို့ကုမ္ပဏီသူဋ္ဌေးတွေဆိုရင် သူတို့ပစ္စည်းကြော်ငြာရင်း ကျောင်းသားတက်ချင်တဲ့ကျောင်းလခကိုစိုက်ထုတ်ပေးရင်း Brand Scholarships တွေ ပေးနိုင်တယ်။ တစ်ချို့ထူးခွန်တဲ့အားကစားသမားတွေကို Athletic Scholarships ပေးနိုင်တယ်။ ပညာရပ်တစ်ခုမှာသိပ်ထူးချွန်တဲ့ကျောင်းသားတွေကို Creative Contest Scholarships ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကို အစိုးရ နဲ့ စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ မသိလိုက်ဘူးဖြစ်နေမှာစိုးလို့ မျက်စိအမြင်ဖွင့်သတင်းလွှင့်ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။
. ကိုညီညီ (တောင်ကြီး)
Labels: Learning articles, ပညာရေး၊, ဗဟုသုတ